Farshaxanka Muuqaalka Buugaagta Comic
The Marvel Comics Anti-Hero ayaa ku soo duulay goobtii toddobaadyadii oo ay la socdeen jilayaal sida Punisher iyo Wolverine. Noocani noocan oo kale ah ayaa si dhakhso ah u noqon doona mid caan ah oo ka soo horjeeda isbahaysiga geesinimada badan iyo inta lagu jiro siddeedaad iyo tobnaad, geeska lidka ku ah xukunka ugu sarreeya, wuxuu sii balaarinayaa DC Comics iyo Image. Dadku waxay jecel yihiin dabeecaddan madow iyo kuwa badan oo sharcigooda gacanta ku haya oo ay ku soo baxaan caddaalad iyaga u gaar ah, iyada oo aan loo haynin geesinimada maalinlaha ah ee maalinlaha ah. U fiirso 10ka ugu fiican ee kahortaga kahortaga buugaagta munaasabadda.
Ciqaabta. Marvel Comics
Punisher waa mid ka mid ah waxaan u kala soocayaa sida ugu horeysay ee dhabta ah ee kahortaga geesinimada ee buugaagta joornaalada. Wuxuu dhab ahaan sharciga u qaataa inuu gacmihiisa ku dilo oo dilo kuwa aan sharcigu taaban karin. Wuxuu la dagaalamay gangsters iyo kormeerayaasha, marwalba marwalba waxay caddaynaysaa macnaha marka ay timaado Frank Castle, mid ka mid ah halyeeyada ugu caansan iyo caanka ah ee ka soo horjeeda buugaagta joornaalka.
Ciqaabtu wuxuu ugu dambayntii ku guuleystaa inuu ka soo horjeedo asxaabtiisa ee Netflix ee Daredevil Season Two. Iska hubi qaar ka mid ah dagaaladii ugu fiicnaa ee Punisher si loo arko sababta uu yahay lambarkeena lambarkeena geeska ah ee wakhti kasta!
Cajiib. DC Comics
Selman Kyle waa gabadh ka soo horjeeda, oo aan u haynin shuruucda nin, oo doonaya inay faa'iido u hesho mustaqbal dheer. Xaqiiqdii waxay leedahay sharaf sharafeed, maaddaama ay badanaa ilaalinayso daciifka iyo istaagida dhibaatooyinka Jaamacadda DC, illaa iyo inta ayan faragelinin maalinteeda. Sida lambarkeena laba geesiyaal anti-gabi ah, dabiici ahaan Selina ayaa mararka qaar isku daraysa geesinimada iyo dembiilaha si ay u helaan laba shimbir oo miro ah oo hal dhagax ah.
Thunderbolts # 110 - Leinil Yu Venom. Copyrright Marvel Comics
Venom waxaa loo yaqaana mid ka mid ah cadawga ugu weyn ee Spider-Man , laakiin sanadihii ugu dambeeyay, waxa ay qaadatay kaalin geesinimo ah sida Agent Venom. Cudurka Venom wuxuu bedelay marti-geliyayaashii sano ee la soo dhaafay, qoraayaduna waxay u adeegsadeen isaga oo aan si xeeldheer lahayn u adeegsanaya ficil-celin hagaagsan. Dabeecadda dabiiciga ah mar walba waa ay isbedbeddeleysaa, laakiin marka ay soo baxdo, waxay noqon doontaa mid xiiso leh inay aragto haddii ay ku qaadaan waddo geesinimo leh ama jahwareer leh.
Thunderbolts # 110 - Green Goblin. Qodobka Sharciga ee "Copyright Marvel"
The Thunderbolts asalka ah ayaa bilaabay inay yihiin shakhsiyaadka ay hogaaminayaan Baron Zemo oo u adeegsanaya geesinimo leh himilada ugu dambeysa ee adduunka. Kooxdu markii ay heshay dhadhanka labadii geesinimo iyo shakhsiyadaba, ugu danbeyntii waxay ka soo horjeedeen siyaabihii hore waxayna bilaabeen inay isku soo dhaweeyaan waxa loogu talo galay inay u adeegaan dadka kale. Thunderbolts ayaa isbeddelay waqtigii iyo iyadoo hoggaanka kooxdu ay bedeleen, sidaas awgeed xubinimada iyo ujeedada kooxdu waxa ay ka soo rogtay nuqul ka mid ah geesinimo badan, oo ah geesinimo badan oo kooxeed. Tani waa wax aan macquul aheyn koox koox ah oo leh niyad jaangooyo marmar ah, laakiin xeerka akhlaaq-darrada ah ee akhlaaqda.
Kooxda ismiidaaminta ayaa dhab ahaantii ka koobnayd dad la tuhunsan, kuwaas oo ka shaqaynaya xukuumadda si ay u bixiyaan deyntooda bulshada marka la xiro. Waxay ka shaqeeyaan buugaagta oo si buuxda u shaqeynaya macaamiisha taraafikada oo si sahlan ugu noolaan kara noloshooda. Dadkan mucjisooyinka ah ma rabaan inay sameeyaan wax wanaagsan, laakiin waxaa lagu qasbay hoggaamiyaha kooxda Amanda Waller si ay u helaan xorriyadooda ama ay u dhintaan isku day. Sannadka 2016-ka, Kooxaha Is-xeel-dheeraynta waxay soo saaraan awoodahooda geesinimada kahortaga shaashadda weyn markii ugu horeysay .
Xuubka afka leh wuxuu isku helay labada dhinac ee xayndaabka xagasha wanaagsan iyo xun xun oo ka badan hal qof oo tirin kara. Deadpool waxay hubaal ahaan u shaqaysaa nafteeda, laakiin waxay isu aragtaa inuu ka soo horjeeda xoogga sharka ah in ka badan hal mar, xitaa haddii ay tahay uun inuu helo qosol.
Waxaa hubaal ah in mid ka mid ah halyeeyada ladagaallanka ah ee ka soo horjeeda liiskeena, Deadpool filimka aadka loo qiimeeyo ayaa ahaa guushii geesinimada ka soo horjeeda dhammaanteen.
Kalluunka. Sawirada Sawirada Sawirada
Al Simmons waa nin loo isticmaalo in uu ka shaqeeyo hooska iyo sida uu u shaqeeyo, wuxuu sameeyay waxyaabo badan oo ka soo horjeeda sharciga, laakiin xorriyadda iyo caddaaladda. Sida Spawn, wuxuu sii waday inuu ka shaqeeyo kuwa waxyeelo u geysan lahaa dadka kale, laakiin had iyo goor naftiisa.
Inkasta oo markii ugu horeysay uu ahaa geesinimada, waxaa laga yaabaa inay ahayd waqtigii kuxigta Uncanny X-Men # 251-253 markii Wolverine uu cadhadiisa oo dhan ku riday Reavers in uu ka noqday mid ka mid ah geesiyaal ka soo horjeeda heerkiisa halkii uu ka ahaa kaliya nin adag oo leh ciriiri iyo dabeecad.
Marvel Comics ayaa inta badan soo bandhigay laba nooc oo Wolverine ah. Dhinaca kale, waxaa jira geesinimada X-Man, Avenger, iyo macallin marmar ah. Dhinaca kale, waxaa jira Uncanny X-Force Force Wolverine, oo dilaya si adduunku u badbaadiyo. Diyotaro liddi ku ah anti-gariikha ah haddii aan waligeen aragno.
Waayeelka. DC Comics
Qaar badan oo ka mid ah sawirada "The Watchmen" ayaa ku nool kana shaqeeya meel ka baxsan sharciga si ay u gaaraan ujeedooyinkooda caddaaladda. Rorschach iyo The Comedian waa labadii kan ugu caansan ee geesinimada ka soo horjeeda kooxda, inta badanna waxay sharciga u qaadaan gacmahooda si ay ula kulmaan calaamadahooda caddaaladda.
Si ku haboon, Watchmen guud ahaan macno ahaan waxaa lagu tilmaami karaa anti-hero, taas oo macnaheedu yahay in Alan Moore iyo maskaxda Dave Gibbon uu abuuray fikradda ah superheroes ee joornaalada.
John Walker waxa uu lahaa dhan markii loo doortay inuu noqdo Captain America soo socda. Waxa uu ka welwelsan yahay habka "iskuulka da'da ah" ee wax loo qaban lahaa iyo dareenkiisa oo u horseeday inuu lumiyo xiddigaha iyo xadhkaha Steve Rogers. Dawladdu ma aysan dhicin, laakiin waxay u beddeshay gaduudka, cadaanka, iyo madow ee xiran Wakiilka Mareykanka. Socdaal la'aanta walaac ka qabo sharciga caadiga ah ee maskaxeed wuxuu ka dhigayaa wakiilka dawladda ee ugu fiican, oo diyaar u ah inuu sameeyo wax shaqo ah.
Deadpool waxay geli lahayd dembi, laakiin Walker ayaa noqon kara kuwa ugu caansan ee maskaxda ku haya halkan. Iyo liiska ugu fiican ee geesiyaal liddi ku ah majaajilooyinka oo dhan, taasi dhab ahaantii wax yiraahdo.
Waxaa soo cusbooneysiiyay Dave Buesing
Muxaadaro asal ah oo ka mid ah Comic Luminary Stan Lee
Top 10 Buugaagta ugu caansan
Calaamadaha Dukumintiga ugu Sarreeya
Maxay Tahay Qorshaha Kitaabka Comic?
20 Dhacdooyin Diiwaan Gelis ah Dhacdooyin kasta oo Comics ah waa inuu aqriyaa
Waa maxay Mawduuca Dib u Eegista?
Dib u soo celiya joornaalada joornaalka
Sidee loo noqon karaa buugga joornaalka
Sidee loo noqon karaa Warqad Kitaab ah Comic
10 Buugga Comic Books for People Marna Akhris mid
Daabacayaasha iyo Shirkadaha Diiwaanada ee Top Comic Book
Sidee loo noqon karaa Diiwaanka Comic Book
Taariikhda Dumarka waxay ku dabbaaldegtay Buuga Caruurta
Waa maxay hubka Ilaah?
Tababar Xirfadeed Ameerikaan ah Ann Cook
25 Dakhliga Guud ee Dhabarka ah ee Aan Dhamaan Waxaad Aamisan Yihiin Dadka Dhab ahaan Ah
Sida loo aqoonsado Aqoonsiga iyo Beerka Xakamaynta
David Berkowitz - Wiilka Sam
10ka Badbaadada Awoodda badan iyo Tifaftirayaasha Taariikhda Dunida
Ku Xidhxidhka barashada erayada
Eeg Codes Model Model by Year
African-American Firsts ee Film iyo Tiyaatarka
Sida Loo Qorsho Mashruuca Horumarinta Ciyaarta
Gawaarida Gawaadhida Gawaarida
Sida Loo Sheego Waalidiintaada Waxaad Diyaarineysid Fasalka Kuleejka
Yaa Baadi Ah Dadka?
Farshaxanka Farshaxanka - Rinjiga Rinjiga ee Ragga ama Akrooliyada
Sida loo Isku Qoro Fikradda "Conoscere" ee Talyaaniga
Xaqiiqooyinka ku saabsan Goobta Marinada ee Gacanka Mexico
Funny Donald Trump Sawirada iyo Memes
Sidee Magaaladu Badbaadisay Guryaheeda Guryahooda
Ku tababarista sameynta qoraalada digniinta ah
Waa in aad haysataa aalado loogu talagalay in lagu barto Cayayaanka Live
Dinosauryada Large, Hilibka Hilibka leh